सिकाइमा भाषाको प्रभाव – सिकाइ खबर- A complete news portal on Education in Nepal
भाषाको जवर्जस्त प्रयोग र जवर्जस्त बुुुुझाई सिकाइका लागि हानिकारक हुन् । शुरुबाटै शब्दशक्तिका हिसाबले भाषिक ज्ञानको रहर पनि पाच्य हुँदैन । उमेर,अवस्था,स्थान तथा समुदायपिच्छे भाषिक व्यवहार अलग,अलग हुने गर्दछ । समयका क्रममा विभिन्न कारणहरुले गर्दा भाषामा परिवर्तन पनि देखिन्छ । समय,स्थान र परिवेशअनुसार भाषिक व्यवहार गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्नु आजको शिक्षाको एउटा लक्ष्य पनि हो ।
एकछिनपछि पुनः उनै माननीयको फोन आयो । ‘ए जिशिअ साब,( कार्यालयको नाम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र प्रमुखको पद इकाइ प्रमुख भएपनि जनजिब्रोमा शिक्षा कार्यालय र जिशिअ नै भन्ने चलन आजपर्यन्त छ ) तपाईं कति पढनुभा छ ’ ? भने । मैले यति भनें । ‘के विषय हो ’ उनले सोधे । मैले ‘नेपाली माननीयज्यू’ भनें । ‘तपाईंलाई भाषा भनेको केहो थाहै रहेनछ । यस्ताले के नेपाली पढेको ?
अघि तपाइले मलाई छाउरा भन्नुभाथ्यो ? के हो छाउरा भनेको ? कस्को बच्चालाई छाउरा भनिन्छ थाहा छ ? तपाईंका छाउरा भन्नुभयो । उनीहरु छाउराभएपछि म के भएँ’ ? उनले मेरा कुनै पनि कुरा सुन्न चाहेनन् । मलाई एकोहोरो प्रश्न मात्र तेर्साए । ‘मसँग युनिभर्सिटी पढाउने प्रोफेसर पनि सँगै हुनुहुन्छ । तपाईं मात्र पढेको भन्ने’ ? मेरो होस, हवास उड्यो । प्रतिकार वा स्पष्टीकरण दिने मौका नै दिएनन् । मैले लक्षणामा भनें, उनले अभिधामा बुुझे ।
एउटा राजनीतिक प्राणीमा कसरी कुशाग्र मनोविदको शैली रुपायित भएछ म दङ्ग परें । ३३ वर्षको जागिरे अनुुुुुुुभवमा यसरी मिही पाराले अन्वेषण गर्ने निजामतीमा सचिवसमेत मैले एकदमै कम देखेको÷भोगेको छु । उनले‘ मेरो घर पनि देख्नुभयो ? कस्तो लाग्यो ?’भने मैले ‘देखे हजुर । स्वर्ग नै रहेछ’ के मात्र भनेको थिएँ , कुरा समाइ हाले । ‘स्वर्ग ? के भन्नुुभयो सर ? स्वर्ग त मरेको मान्छे बस्ने ठाउँ हैन र ? म त जीउँदै छुत’ उनले भने ।